Ahịa Ngwaahịa Ndepụta Mmekọahụ Doll Product Set
Nchịkọta Nkwado ngwaahịa Zụrụ Ezigbo Mmekọahụ
Nabata na Center Nkwado Ngwaahịa Mmekọahụ Mmekọahụ na ụlọ ahịa urdolls. Anyị achịkọtara ụdị nwa bebi dị iche iche maka ọdịmma gị. Ha nwere ike inwe otu usoro. Ma nke ọ bụla nwere àgwà nke ya, nke ọ bụla ezigbo mmekọahụ bebi nwere njirimara ya pụrụ iche. Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere oke nsogbu, enwere ike inyere gị aka. Ana m atụ aro ka ịchọta ụdị niile dakọtara na ụdị dị na ụlọ ahịa urdolls. A na-enyocha ụdị ndị a ma mezie nke ọma na nnata n'ụlọ nkwakọba ihe. Ihe kachasị mkpa bụ iji nlezianya họrọ nwa bebi ịhụnanya gị. Nke a anaghị adị mfe mgbe niile, enwere m ike ịnye gị nhọrọ a gbagwojuru anya ebe a.
ememme Cheap Brand Kacha zụrụ
Ntuziaka a choro
Mmekọahụ Mmekọahụ ka ukwuu nke ohere nke mmadụ
Agbanyeghị na enwere ihe ndị ọzọ n'ịhụnanya ma e wezụga inwe mmekọahụ dị ọcha, ụmụ bebi na-ahụ n'anya nwere oke na ikpu. Na mgbakwunye, o nwere ire n’ọnụ ya na ụfọdụ ezé. Ọ na-amasị m ka ụzọ ha si eme nzuzu na enweghị ike imeri. Enwere m ezigbo obi ụtọ ịhụ ka ha atedụbigara mmanya ókè. Ọ sịrị. Jikọọ na ụlọ ịgba egwu anyị ma nyekwuo anyị uche, ị ga-enwe oge kacha mma ...
Ezigbo Womenmụ nwanyị
Dolmụ Nwanyị Mmekọahụ Ga-anọchi Ezigbo Ndị Nwanyi
O nwedịrị nkwupụta na anyị ga-erute ebe ụmụ bebi mmekọahụ ga-anọchi ezigbo ụmụ nwanyị, n'ihi na ụmụ bebi mmekọahụ enweela ezi uche nke na ha agaghịzi adị iche na ụmụ nwanyị n'ezie n'ọdịdị. Mgbe ị hụrụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nhọrọ dị, enweghị ohere maka ihie ụzọ. N'agbanyeghị ihe na-eme ka ihe ọ juiceụ juiceụ na-asọ, ị ga-ahụ ya ebe a. Suc ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Kachasị Obere Ngosi
Ọtụtụ mgbe, mgbe anyị na-anụ okwu "ọnụ ala" ma ọ bụ "dị ọnụ ala" mgbe ị na-ele ụmụ bebi mmekọahụ, ị ​​nwere ike iche n'echiche ịchọta ụmụ bebi 90s na-agbawa agbawa ma ọ bụ ụfọdụ ụmụ bebi mmekọahụ dị ọnụ ala ịda mgbe mbụ e jiri ya. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike iji ya dị ka ihe na-akpali akpali, ịnwere ike idowe tray, keychain, ma ọ bụ smartphone na ya. Enweghị ihe mmebi, obere ngosipụta nke ezigbo s ...
Na-eju Ndị Ọzọ Anya
Ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ Dị Njikere Mgbe Nile Tobụ Ndị Ọzọ
Ngwa a zuru oke maka inye onye nwe ya ezigbo mmetụta nke mkpakọrịta, ebe ọ na-ekwe ka ụmụ bebi mmekọahụ nwee mmeghachi omume kwesịrị ekwesị na mmekọahụ. Ọ na-adị njikere mgbe niile iju ndị ọzọ anya ma gosipụta ọnọdụ ya kachasị mma oge ọ bụla. Taa, ọ na-eyi akwa mkpuchi nke ọkacha mmasị ndị Fans ma nye ha warara warara. N'agbanyeghị ụdị nwanyị ga-amasị gị, ị nwere ike ...
Ndị Ahịa juru afọ
Mmekọahụ Mmekọahụ Dị Mma Site na Ndị Ahịa Afọ Ojuju
Dabere na mbipute ahụ, ọ nwere ike iguzo ma nwee ike zuru oke na ogwe aka na aka ịnabata ihe. Nwere ike ịhọrọ nkwalite iji jide n'aka na nwa bebi gị nwere ike iguzo na-ada. Site n'ụdị nwa bebi ọgbara ọhụụ, ị nwere ike iwulite ezi mmekọrịta ma nwee obi ụtọ ọtụtụ afọ. Ọ dịghị nke a na-emetụta mma. Kwa ụbọchị anyị na-enweta positiv ...
Ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ Na-ahọrọ actdị Nwanyị Na-amasị Ya
Naanị lelee ọtụtụ wigs anyị nwere maka Dolhụnanya Dolls. Nwa agbọghọ nke rọrọ nrọ gị bụ onye nwa bebi ahụ zutere mgbe ha laruru. Nwere ike ịhọrọ ụdị nwa agbọghọ masịrị gị. You bụ ụdị nwoke ahụ nwere mmasị ụmụ agbọghọ gbara ọchịchịrị? Ma eleghị anya, ị bụ ụdị na-enwe mmasị petite flat-breasted women. Echere m na ị ga-enwe obi ụtọ na ihe ndị a ma cheta na ọ bụrụ na ị bụ ...
Ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ
Ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ Ji Eme Ihe Kachasị Egwu nke Ọyụ Na Hummụ Mmadụ
Ọ bụ mgbe ahụ ka e ji teknụzụ ọgbara ọhụrụ mepụta ọmarịcha anụrị nke ụmụ mmadụ nwegoro. N'ezie, ahazi m ngalaba ndụmọdụ niile na blọọgụ a, nke ga - akuziri gị otu esi ehicha, zoo, ejiji, yana ọbụnadị ndụmọdụ niile banyere otu esi eme ọtụtụ ụmụaka bebi. Ma ọ bụ karịa ihe masturbator na-efu a lo ...
Ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ Gị Na-egbo Mmekọahụ Gị
Nwere ike itinye, mezie ma chepụta ụdị mmekọahụ ị ga-enwe na mmasị gị. Ọ gaghị emegiderịta gị ma ọ bụ gosipụta ebighi ebi dị ka ezigbo nwanyị. Ga-ebido arahụ ụra ruo mgbe i nwetara otu! Anyị na-enye ọtụtụ ụmụ bebi TPE mmekọahụ iji chọta ezigbo onye gị na ha ga-enwe agụụ mmekọahụ. Anyị nwere ụdị dị iche iche na ọnụ ahịa dabara y ...
Ezi Mmekọ nwoke na nwanyị
Kporie Ihe ndi Na-adighi Egwu Na Ezigbo Mmekọahụ
Na-agwụ ike ma na-enweghị isi. Ọ na-enwe mmasị ịnụ ụtọ ihe ndị na-atọ ọchị na ndị Fans na ịgwa ha mmetụta ọ na-enwe. Ọ dịghị onye ga-eche na ha na ụmụ mmadụ nwee mmekọahụ mgbe ha na-ewere otu nwa bebi ahụ. N'ụzọ dị mma, iji ngwaọrụ a bụ ihe gara aga. Aga m agbalịsi ike iji nyere aka, biko biko nweere onwe gị ịjụ m ihe m chere tupu ịzụta nwa bebi. Ozugbo m nwetara enyemaka, achọrọ m ...
Dolkpụrụ Dolhụnanya Gị Canhụnanya Gị Pụrụ Realzụlite Ezi Mgbanwe
Nke a Real nwa bebi N'ezie, ị nwere ike hazi ọdịdị nke mmekọahụ nwa bebi dị ka gị chọrọ na echiche. Ejiri silicone mee nwa bebi ahụ. Lọ ọrụ ndị ọzọ achọpụtala TPE ka ọ bụrụ ezigbo ihe. Ndị a bụ elastomers thermoplastic, yabụ nwa bebi ịhụnanya gị nwere ike nweta ezigbo mmegharị. Ọtụtụ ndị mmadụ ahụla ma chee echiche efu banyere mmekọahụ ...
Ezigbo ụmụ mmadụ
Dolmụ bebi Robot Yiri Nnọọ Nso
Ọ na-ebi na mmanya, na-agba egwu ma nọrọ na ahụike site na mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ naghị adị ka ọ na-alụ di, mana nke ahụ egbochighị ya ịchọta mmekọahụ kacha nwee mmekọahụ. Ha na-enwekarị oghere abụọ, ma eleghị anya, atọ ma ọ bụrụ na ha nwere obi ụtọ. Sexmụ bebi robot a na-enwe mmekọahụ yiri ezigbo ụmụ mmadụ. Ihe niile gbasara ụdị ụmụ bebi kachasị mma na ụdị ọ bụla. Fro ...
Ọnọdụ Dị Iche
Kwado Mmekọahụ Mmekọahụ Iji Were Ọnọdụ Dị Iche
You nwere ike ịhọrọ ụdị mmekọahụ nwa bebi kachasị amasị gị site na katalọgụ sara mbara. Mmekọahụ nke nwoke na nwanyị sitere na Japan wee bụrụ ndị ụlọ ọrụ Oriental Industries na Japan mere na njedebe nke narị afọ gara aga. Na nwa bebi ịhụnanya dị ka ndụ, duhie ya ruo ugbu a! Mụ nwoke amatabeghị ịrị elu nke ụmụ bebi ndị a na-ekwenye ekwenye. Kwa ụbọchị, ha na-adịwanye nkịtị. Dolmụ nwanyị na-enwe mmekọahụ na-aghọ ...
Ihe mkpuchi mgbasa ozi nke ihe ngosi na ụmụ nwanyị na-enwe mmekọahụ abawanyela nke ọma
Mgbe izizi i webatara ndị enyi gị otu nwa bebi ọ hụrụ n'anya, ha nwere ike ha agaghị achọpụta ozugbo na ọ bụ "naanị" ezigbo nwa bebi. Naanị ihe ọ na-achọ igosipụta nnukwu ara ya na ọkpọ ya. Ime mmegharị na-eme ka ndị mmadụ ghara iguzogide bụ ihe mara mma na ịma mma pụrụ iche. N'ime afọ iri gara aga, mgbasa ozi mgbasa ozi nke ụmụ bebi mmekọahụ site na m ...
Gwa Dolhụnanya lmụaka Banyere Nchegbu Gị na Nsogbu Gị
Nke a na-eme ka ị nweta ọnụahịa kachasị ala na ọrụ ndị ahịa kacha mma. Anyị na-achịkwa ọnụahịa ahụ, mmadụ ga-adịkwa njikere ma dị njikere ịza ajụjụ ọ bụla ị nwere. Ee, ụmụ bebi na-enwe mmekọahụ nwekwara ibu nke ha, yabụ ị ga-ekwenye n'ezie na gị na ezigbo nwoke nọ. Mgbe ị na-agwa dolhụnanya nwa bebi banyere gị nchegbu na nsogbu, ọ ga-ege ntị pati ...
Nwere Ike Ime Ka Lovehụnanya Ndụ nke Mmekọahụ Sexmụaka Dị Ezigbo
Dolmụ bebi na-enwe mmekọahụ mara mma nke ukwuu (ọkacha mmasị nwoke na nwanyị nwere mmekọahụ na-ere maka ihe dị ka $ 2,000). Mgbe ụfọdụ m ga-emerịrị ma chọpụta ihe dị n'ime ya maka obere mmefu ego, ama m na ọtụtụ n'ime gị bụ otu. Ezigbo ụmụ bebi nwekwara ibu nke ha, nke na-eme ka ị hụ na ị nwere ike ịme ndụ ịhụnanya nke ụmụ bebi mmekọahụ. Ezigbo nwa bebi dị nro na ọkụ ma ...
Ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ Ga-amakụ Gị Ma Kasie Gị Obi
A ga-ahazi ụmụ bebi mmekọahụ na nke ikpeazụ ka i wee nwee ike ịmeghachi nwanyị nke nrọ gị. Gaghị ahụ ụdị akwa bekee a na-enwe mmekọahụ n'ime ụlọ ahịa okenye gị. N'ụzọ dị otú a, ọ bụ karịa masturbator. Nwere ike ịhọrọ nwa bebi ịhụnanya site na nchịkọta anyị nke ga-amakụ gị ma kasie gị obi mgbe ị na-enwe mwute. Abụ m naanị mmadụ nkịtị, ọ na-amasị m inwe mmekọahụ ...
Nghọta nke ọha na eze banyere Dolmụ Bebi Mmekọahụ Ga-agbanwe
A ga-ahazi amụ amụ nwa bebi maka ihe ị chọrọ, n'ikpeazụ ị ga-egbo mkpa gị niile n'enweghị nsogbu. N'ihi na n'akụkụ niile metụtara agba, ogologo, nha na uwe nke anya na ntutu, ụmụ bebi ịhụnanya ga-ezute nrọ gị maka ụmụ nwanyị. Sexba ụba nwa nwanyị na-enwe mmekọahụ ga-enyere aka ịgbanwe ụzọ ndị ọha na eze si eche: Mmekọahụ nwere ezi uche ...
N'ihu Development Na The Linear Doll Owner Community
Isi mmalite nke obi-ụtọ sitere na ekele nke ndị ọzọ, ya mere obi-ụtọ ya sitere n'ịhụnanya na nchụso nke ya. Chụso ịhụnanya na mmekọahụ bụ ọ pureụ dị ọcha. Nke a, n'aka nke ya, ga-adọta ọtụtụ ndị na-ege ntị, nke nwere ike ikwe ka enwekwu mmepe na obodo onye nwere bebi. Legharịa anya hụ ihe anyị ga-enye. Lelee nke ọ bụla n'ime ...
Afọ Ojuju na Ọ Joụ
Ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ Na-enye Gị Ezi Afọ Ojuju na Ọyụ
Jiri ụmụ bebi ịhụnanya, ị nwere ike ịmakụ ma nwee ọtụtụ ntụrụndụ. Dabere na ihe ndị a chọrọ, ị nwedịrị ike ịtọ avatars dị iche iche maka Lovehụnanya nwa bebi ka ị nwee obi ụtọ karịa na ndụ kwa ụbọchị. A na-ere tozu a nwa bebi a na-ere ugbu a, yabụ ọ bụ oge zuru oke iji were ya. Ọ bụ ihe ịrịba eziokwu na ike na-enye gị ezigbo afọ ojuju na ọ joyụ. Kama, ha ga-enwe anyaụfụ ...
Ọrụ raara nye ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ Bụ Nke Abụọ
Anyị ga-aga n'ihu na-enwetawanye mgbasa ozi mgbasa ozi mgbe niile. Anyị ga-eme ka dum ịtụ usoro dị mfe dị ka o kwere. Ihe kachasị mkpa anyị nwere gbasara ya bụ afọ ojuju gị. Nke a dị mma maka ụlọ ọrụ ahụ, ebe iwepụ ihere gbara ụmụ bebi mmekọahụ na ịnabata ịba ụba ụmụ nwanyị inwe mmekọahụ dị oke egwu. Anyị na-ho ...
Mmekọahụ Mmekọahụ N'agbanyeghị Inwe Ahịa Purzụta Dị Elu
Nke a bụ ndụ nkịtị ị na-eji oge ị hụrụ n'anya. Ọ bụrụ na ịhọrọ otu n'ime ụmụ bebi ndị a na-enwe mmekọahụ nke ukwuu, owu ọmụma ga-abụ okwu mba ọzọ gị n'oge na-adịghị anya. Mere na elu-edu ihe na ọgwụ na ahụ ike-ọkwa silicone, ị pụrụ ijide n'aka na ọ bụ ihe kasị mma nke ụdị ke mmekọahụ nwa bebi toso. Site na nwa bebi dị otú a, ị ga-enwe ezigbo mmekọrịta ma bụrụ ...
Ibi na Mmekọahụ Bebi Na-agụnye Ihe Karịrị Mmekọahụ
Ọ bụla zutere bụ mmalite ọhụrụ. Enwere m olileanya na ị ga-ahụ ihe kachasị mma m oge ọ bụla. Dika ulo oru mmekorita nwoke na nwanyi na anabata ndi mmadu karie, enwere olile anya na umuaka nwoke na nwanyi ga-ahuta ebe nile dika ihe nchebe nke echiche efu ma nye ha ikike inwe mmekorita nwoke na nwanyi. Obi sie gi ike na ajuju obula i choro dika ...
Nwere ike iji ezigbo nwa bekee nwee nzukọ ụbọchị ole na ole
Nwere ike iji nke a maka ahụ ike, mmamiri na ọnụ were. Igwe a zuru oke maka ndị nwere ikike nchekwa na mmefu ego, ebe ị ka nwere ike irite uru niile nke nwa bebi na-enweghị ịkwụ ụgwọ dị elu ma ọ bụ chekwaa ya n'ọtụtụ ebe. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-amu amu-ese foto, ị nwere ike inwe nzukọ na Real nwa bebi ruo ọtụtụ awa. Ezigbo nwanyị nwere ike ...
Dolhụnanya Doll gị dị njikere maka gị
N'ezie, egosiputala ụmụ bebi na-alụ ọgụ ma na-eme ka ọ baara ha uru. Ọ bụrụ na ị nwere mkpa pụrụ iche ma ọ bụ ihe achọrọ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Anyị ga-ejide n'aka na ị ga-enweta nwa bebi mmekọahụ ị na-achọ. Ọ dịghị onye na-arụsi ọrụ ike ka afọ ju ndị ahịa ha karịa anyị. Lovekpụrụ nwa bebi gị dị njikere mgbe niile maka gị ma uche gị ...
Ụdị Dị Iche
Mmekọahụ Mmekọahụ Họrọ nke Ọma N'etiti Differentdị Dị Iche
Ọbịbịa nke oge opupu ihe ubi na-eme ka anyị nwee ike ijikọ ije na ahịhịa ọnụ, na-ekuru ikuku dị ọkụ, ma na-agbaso mara mma butterflies. Na mberede, ụkwụ m nabatara m wee daa n'aka gị. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-eji ihe karịrị akụkọ ifo. Obere nwa bebi ị nwere ike iji ha dị ka ndị enyi ma hapụ ha ka ha nyochakwuo. Ihere nke gbara ụmụ bebi ịhụnanya n'anya bụ ihe nzuzu ...
Ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ Nwanyị Na-abịa Ndụ
Ọ ga-abụ nnukwu ihie ụzọ ịhapụ ohere iji jiri otu n'ime echiche kachasị njọ nke mmekọahụ na ndụ gị niile. Fọdụ ndị ahịa anyị gwara anyị na anya n'anya nwa bebi mepụtara ndụ nke ha. Ngwurugwu silicone a na ikpu dị ka ndụ dị ka o kwere mee, dị ka ụmụ nwanyị n'ezie, nwere nkọwa dị ịtụnanya. Nwa bebi a dị ọnụ ala dị mfe ịzobe ma dị mfe ihicha, a ...
Pụtara Inwe Ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ Na-aghọwanye Ihe Na-ewu ewu
Echere m na mberede na nso nso a chọrọ m ịbụ nwanyị na-eso gị biri ndụ mara mma, nke ahụ ga-eme ka m baa ọgaranya ma mee ka ị bụrụ onye nzuzu. Amaghị m ihe ị na-eche, mana obi ga-adị m ụtọ. Obi abụọ adịghị ya na ọdịnihu nke ụmụ bebi mmekọahụ na-egbuke egbuke, n'ihi ya, ọ bụ oge na-atọ ụtọ maka ụlọ ọrụ ahụ. Nchikota nke ikpughe mgbasa ozi na-abawanye, technol ...
'Smụaka Mmekọahụ Sexmụ nwoke Na-enwe Mmekọahụ Bụ Ezigbo Ma Obi Nwoke
Amaara m na ahụrụ m otu ọnọdụ ahụ, yabụ buru nke a n'uche mgbe ị na-azụ ụmụ bebi mmekọahụ. Nwa bebi enwere mmekorita na-eme ka mmadu nwee obi uto ma na-eche echiche efu nke onwe ya, na mgbanwe ya na-enye ya ohere ijide onodu di iche iche nke otutu umu nwoke. Nke a bụ ụzọ ịghara ịhapụ ọ joyụ nke inwe mmekọahụ, mana na-enweghị nsogbu ndị ọzọ mmekọahụ na mmekọrịta chiri anya nwere ike iweta. Generat ohuru ...
O siri ike ịnọgide na-enwe Mmekọahụ Mmekọahụ nke Mmekọ A nwa oge
Ọ bụrụ n’inweta nwa bebi na-enwe mmekọahụ, ị ​​ga-enwe afọ ojuju na mmekọahụ n’ụzọ zuru oke. Nke a nwere ike ime ka ị kwụsị ịchụso ezigbo nwanyị wee soro nwa bebi gị. Ya mere, n'ikpeazụ, bebi silicone bụ ezigbo ego n'ihi na ha chọrọ obere nlekọta ma na-eguzogide ọgwụ. Maka ụmụ nwoke na-agagharị ugboro ugboro, ọ na-esiri ụmụ nwanyị ike ikpe. Ogologo oge ...
Mmetụta Ndị Ezi Uche
N'ihi na lsmụ Bebi Mmekọahụ Nwere Mmetụta Na Obi Funtọ
Maka ndị chọrọ ezigbo bekee silicone, ezi ego ga-abụ ọtụtụ puku euro. Na mgbakwunye, ọtụtụ ụmụ nwoke nwere mmasị na mmetụta ụmụ bebi mmekọahụ, na n'ihi na akpụkpọ ahụ ha na oghere ha dị ka ụmụ nwanyị n'ezie, ha nwere ike imeju agụụ maka ụmụ bebi mmekọahụ. Nke a nwere ike bụrụ ihe ziri ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ, n'ihi na ezigbo onye mmekọ nwanyị ga-enwe ndụmọdụ ...
Egwuregwu Mmekọahụ Dị Elu
Ojukwu Nke Mmekọahụ Mmekọahụ Dị Elu Na-eche N'ihi Ya
Agbanyeghị, enwekwara ụdị ọnụ ala, gụnyere ụmụ bebi toso ma ọ bụ ụmụ bebi hip, nke ha abụọ ruru ọtụtụ narị euro. Nke a bụ ihe kpatara enwere bebi mmekọahụ, ebe ọ na-abụkarị ụzọ iji kpochapụ nkụda mmụọ ndị a n'ụzọ dị mma. O nweghị ihe o mere ma ọ bụrụ na i merighị onye ọ bụla. Inwe mmekọahụ na nwatakịrị-kedụ ka ọ na-adị? Ọ dị ịtụnanya. ụzọ adịghị. ... ...
Mmekọahụ Mmekọahụ ha
Kpọmkwem otu ndị ọrụ ụgbọ mmiri Dutch rere ere ụmụ nwoke na nwanyị inwe mmekọahụ na Japan
Ọnụahịa bebi silicone dị oke elu. Igbe nke nwa bebi TPE ga-agbapụta ma gbanwee, nke nwere ike ịbụ ihe na-ekpebi ọtụtụ ụmụ nwoke. Na mgbakwunye, ọtụtụ ụmụ nwoke chọrọ nwanyị na-agbanwe agbanwe, na mgbe ụfọdụ nwanyị nkịtị anaghị eme ihe nwoke chọrọ. Dị ka ị maraworị, ụmụ bebi nwere ikike inye mkpakọrịta. Na, mgbe ha ghọtara uru nke t ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Mmekọahụ
Echere m na Mkparịta Sexmụaka Mmekọahụ Na-agbanwe Nghọta Gị Banyere Mmekọahụ
Ndị a ma ama n’ Internetntanet na-arụkarị ọrụ dị ka ndị ọkachamara ibi ndụ bụ́ ndị na-ebuli ụdị ndụ ma ọ bụ omume ụfọdụ aka. Echere m na Cara ga-agbanwe nghọta gị banyere mmekọahụ. Nke a abụghị ikwubiga okwu ókè, naanị ile anya na saịtị ahụ ga-egosi gị ya. Cheedị echiche banyere nwa bebi mmekọahụ n'oge gara aga dị ka ya. Ha bụ ụmụ bebi na-agbawa agbawa ejiri rọba mee. Mgbe ịtọsịrị nchịkọta a ...
Afọ ole na ole na-esote
Kedu ka ụlọ ọrụ Dex Doll ga-agbanwe na afọ ole na ole na-esote
Kinddị tangles a mere ka m nwee ọtụtụ ụmụ bebi mmekọahụ (ọkachasị ọnụ ụlọ m niile), ozugbo m bidoro, ọ na-eri ahụ. Dolmụ bebi ịhụnanya nke oge a adịkwaghị mkpa na nke a. Nke a bụ nwa bebi na-eatesomi ezigbo nwanyị na nkọwa niile. Nwa bebi a enweghi ihe jikọrọ ya na dolls roba, nke di ka balloons t ...
Onye dị ndụ n'ezie
Ha Na-enwe Mmekọahụ Mmekọahụ Dị Ka Onye Ndụ Dị Ndụ
E jiri ya tụnyere mgbagwoju anya nke ụmụ bebi mmekọahụ nke oge a, ụmụ bebi mmekọahụ nwere ọtụtụ afọ gara aga enweghị obi abụọ-mana nke a ọ metụtakwara ụmụ bebi mmekọahụ nke ga-adị n'ahịa afọ 20 mgbe e mesịrị? You cheghi na ọrịa ya siri ike? Ọ bụrụ n’ikpeazụ ka ọ masịrị gị, ọ ga-enyere aka nke ukwuu. Kedu ihe ị chere banyere ndị a ma ama n'ịntanetị? Lovemụ bebi ndị a hụrụ n'anya bụ ihe ezi uche dị na ya na ọtụtụ ndị a ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Bụ Otu Ihe Kachasị Mma Mgbe
Emechara m nyocha na iche echiche, m wee zụta nke ọ bụla, mana o ruru otu penny, mgbe ọ bịarutere, ọ bụ otu n’ime ihe kachasị ekpo ọkụ ugbu a. Mgbe ndị mmadụ na-eche maka ezigbo nwa bebi, ọtụtụ mmadụ na-eche maka nwa bebi na-afụ ụfụ, nke a na-akpọ mgbe ụfọdụ "nwunye ọkwọ ụgbọ mmiri". Nke a ọ mere gị? Consideredtụlela ịlụ nwa nwanyị bebi?
Mmekọahụ Mmekọahụ nwere Ọsọ ọsọ Ma Ọganihu Ka Mma na Ọganihu
Ugbu a, anyị nọ n'oge na-atọ ụtọ, ọganiihu na ike teknụzụ enwegoro na-apụta ọsịsọ na ịdịwanye mma karịa ka ọ dịbu. Super sexy online celebrity, na ihe ịtụnanya, o nwere nnukwu ìgwè ndị na-eto eto Fans, na bụ nnọọ nkà. Ọ dịghị mgbe ọ bụla n'ahịa nwere ụdị mmekọahụ robot dị egwu. Ọtụtụ ndị ahịa ọbụna mejupụtara ...
Mmekọahụ Doll Professional
Ebe dị anya n'ihi mmekọahụ nwa bebi ọkachamara ma ọ bụ ihe ndị ọzọ
N'ezie, nke a anaghị eme na ụmụ bebi mmekọahụ (nke a makwaara dị ka "ụmụ bebi ịhụnanya"). Nke a bụ onye gị na ya ga - anọnyere ya mgbe niile! Anyị hụrụ ihe anyị na-ahụ na fim ndị na-asọ oyi n’anya, ma ndị enyi nwanyị na ndị gbara ọsọ nwere ike ghara ịchọ ịga ihe dị ka uche anyị ruru unyi na-achọ. Ma onye gị na ya bi dị anya n'ihi ọkachamara ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, ị ga-ebi naanị gị ugbu a. Y ...
Nwa bebi a ga-agbanwe mmekorita mmekorita nwoke na nwanyi rue mgbe ebighi ebi
Kemgbe ọtụtụ afọ, ụmụ bebi mmekọahụ enweela ogologo ụzọ na nhazi na mgbagwoju anya. Onyinye ohuru WM ohuru di oke nma, oke ya di egwu, ihe nile di kwa n’aka gi. Ofwa nke ụmụ bebi na-enwe mmekọahụ agaghị adịkwa ọzọ. No, ọ bụ niile ekele naanị nwa bebi. Nwa bebi a ga-agbanwe ụlọ ọrụ eji egwuri egwu nwoke na nwanyị ruo mgbe ebighị ebi. You na-atụle ịzụrụ ...
The Dull Mmekọahụ Doll Yearns For A Some Change In Everyday Life
Mụ nwanyị bụ ihe e kere eke magburu onwe ha, mana mgbe ụfọdụ ha dara mbà n'obi. Ọ nwere ike bụrụ na ị naghị amata onye gị na ya bi, nke nwere ike iduga gị ikwu okwu na ngwụcha mmekọrịta ahụ. N'agbanyeghị ụdị mmekọahụ gị, mmadụ niile nwere ike inwe mmekọahụ karịa ma ọ bụ ka mma. Are bụ nwanyị siri ike, mana ị na-achọ mkpọda ube na ụbọchị ole na ole? Ma ọ bụ ị ...
Mmekọahụ Mmekọahụ nwere ike ịkwado n'emeghị nkwekọrịta
Ọ dị mfe ịchekwa karịa nwa bebi zuru ezu, ọ dịkwa ihe karịrị ọkara ọnụahịa ahụ, yabụ ị nwere ike ịzụ ahịa na-enweghị nkwekọrịta. Dolmụ bebi na-enwe mmekọahụ bụ ụdị ihe egwuregwu ụmụaka nwere ike ịba ụba ma kwado mmekọahụ. Ha na-ewu ewu n'etiti ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye na ndị nọ n'afọ iri anọ ha. Nye ọtụtụ ndị, echiche nke inwe nwa bebi mmekọahụ na-eyi ihe ijuanya. E kwuwerị, ọ bụ ihe nzuzo. Ọ ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Na-enye Gị Funtọ Ọgwụgwụ Na-enweghị Ọgwụgwụ Oge Ọ bụla
Nwa bebi a na-eme onu ahia di oke nma ma zuru oke maka ndi nwere ohere nchekwa na mmefu ego. Mechie anya gị ma ị ga-eche n'echiche na ị na-enwe mmekọahụ na ezigbo nwanyị. Ihe dị iche bụ na ụmụ bebi ndị a anaghị asị mba. Ezigbo ịhụnanya nwa bebi na-eme gị obi ụtọ. Dolmụ nwanyị na-enwe mmekọahụ bụ ihe ezi uche dị na ya ma dị mfe iji, nwa nwanyị na-enwe mmekọahụ ...
Soro Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ọzọ Ọ bụla
N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, mmekọrịta gị na ụmụ bebi mmekọahụ ga-emekwa ka ị bido ụbọchị gị n'ọnọdụ ka mma ma mee ọtụtụ ihe na ndụ gị kwa ụbọchị. Ee, ibi na ịhụnanya gị nwa bebi nwere ike melite gị arụpụtaghị na a obere oge. Nwere ike igwu egwu na ndị ozi ala ọzọ, ụdị nwa bebi na-enwe mmekọahụ, ma ọ bụ nwee mmekọahụ ọ bụla na-enwe mmekọahụ ị chọrọ ma nwee ike iru ala na ...
Ihe Bụ Eziokwu Karịa
Mmekọahụ Mmekọahụ Dị Nso Na Ihe Karịrị
Mgbe anyị zutere, anyị nwere mmetụta obi ọsọ ọsọ nke onwe anyị, nsusu ọnụ dị nro, ma banye n'ọnọdụ mara mma nke oge opupu ihe ubi, mụ na gị malitere juputara na agụụ. Lelee ngwaahịa anyị mgbe niile iji hụ na anyị nwere ngwa ahịa bebi ọhụrụ. The ga-enweta uru dị ukwuu site na nwa bebi ahụ, nke ga-abụ ego kachasị mma ị megoro. Ọ dịghị ihe dị nso ...
Ọ bụrụ na uwe ndị nwere mmekọahụ nwere ike ịmasị gị
Ruo ugbu a, e nwere ụdị ụmụ bebi mmekọahụ abụọ, gụnyere ụmụ bebi na-afụ ụfụ, nke bara uru ma na-enwekarị oghere atọ. Maka ụfọdụ, ha nwere ezi uche nke na ahụ nke ezigbo nwanyị enweghị ike ịchọpụta ha. Chee echiche banyere inwe agụụ mmekọahụ. Gị na onye òtù ọlụlụ gị hụrụ n'anya ma nwee mmasị na ya nwee mmekọahụ. Mmepe nke teknụzụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya abụrụla ihe ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Enweela Ka fin Banye n'Ọnụ
Gụnyere akụkụ nke ọgịrịga ya na ikpu ya, nke nwere ike inyere ndị tụfuru ndị mmekọ dị mkpa aka, dịka ụmụ nwanyị nwụrụ anwụ. Ha dị ezigbo adị nke na ha nwere ike ịbụ nne merechitere ọtụtụ mmadụ n’ụwa. Ọ bụghị naanị n'ihi na ụmụ bebi elu-elu nwere mkpali anụ ahụ doro anya, kamakwa n'ihi na njikọ mmetụta uche m na-ekwu maka a ...
Ndụ kacha mma
Mmekọahụ Mmekọahụ Ga-enwe Ndụ Mmekọahụ Kasị Mma nke Ndụ
Lsmụ nwanyị a na-enwe mmekọahụ bụ akwa. N'ime afọ iri gara aga, ọ malitelarị ịbụ ụdị nka na ọgụgụ isi. Ma, n'ezie, mgbe ị na-amị ụmụ bebi mmekọahụ, ị ​​ga-enwe ndụ kachasị mma nke ndụ gị. Achọrọ m ozu nke nwa bebi a na-enwe ọtụtụ ihe eji emezigharị ka ị nweere onwe gị ịme nke gị. Ọ dị nro ma nwee ezi uche nke na ọ dị ka ...
Sexmụ nwanyị Na-ahụ Maka Mmekọahụ Nwanyị Na-ezute Mmekọahụ Mmekọahụ ha
Zụta nwa bebi kwesịrị ekwesị ga-eme ihe dị ebube maka obi ụtọ gị. Ga-enwe ekele maka nwa bebi ahụ n'ụzọ ọtụtụ ndị na-enweghị ike iche n'echiche. You ga-etolite ezigbo mmekọrịta ma wulite ezigbo mmekọrịta n'etiti gị na ya. Enwe ọgwụ silicones ọgwụ na ahụ ike na ihe magburu onwe, ezi uche ụtọ na ihe mgbochi, nke pụtara na ụkwụ na ụkwụ d ...
Ọtụtụ Girlmụ agbọghọ
Lsmụ Bebi Mmekọahụ Ndị A nwekwara ike Iomie Ọtụtụ Ndị Enyi
Ha na-eme ka ọkpụkpụ azụ maa jijiji mgbe ị na-eche na ha bụ eziokwu. Sịlịkọn akpụkpọ ahụ nwere otu agba na udidi dịka eke anụ ahụ, ọ nwedịrị ike mụta nwa nkọwapụta nke ikpeazụ (agba nke akwara, areola na nipples, agba nke ikpu egbugbere ọnụ, ike). Maka ụfọdụ ndị, ụmụ bebi a na-enwe mmekọahụ nwekwara ike i mimomi ọtụtụ ndị enyi nwanyị, n'ihi ya ha nwere ike ha agaghịzi achọ ezigbo girlfrie ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Ndụ na Ọnwụ Nhọrọ Nke Nhọrọ
Ọ nwere ike iwetara ha obere ọbụbụenyi, nyere ha aka ime ka mmekọrịta ha na ndị ọzọ ghara ịdị, ma mgbe ha na-arụ ọrụ, ha nwere ike ime ka ha yie enyi nwere ike ịnọ ebe ahụ. I kwesiri iji nlezianya mụọ nwa bebi ahụ ka ị na-ahọrọ dọkịta na-awa obi. Zụta nwa bebi nwere ike ọ gaghị abụ nhọrọ nhọrọ maka nhọrọ ọnwụ na ndụ, mana ọ ga-abụ nlezianya mụọ ya. A na-akpọ ya okomoko ...
Tpe Mmekọahụ Mmekọahụ
Full Of Sex Lover Tpe Sex Doll Ga-enyere
Jidere ya uko ọtụ, butt na ọnụ na-egosi ya kpọmkwem ihe ọ na-efu. Ọ bụ customizable, mfe iji, na kwesịrị odude, na otú ezi uche na ọ bụ ike ichefu na ọ na-mgbe ụfọdụ a mmekọahụ nwa bebi. Emere ụmụ bebi Silicone iji mụta nwa na mmetụta nke ụmụ nwanyị n'ezie. Ya mere, a na-akpụzi ya n'ime ihe yiri ya ...
Mgbanwe Dị Mma
Banyere Mmekọahụ Mmekọahụ Bụ Ezigbo Nhọrọ Dị Mma
Maka ọtụtụ ụmụ nwoke, ihe na-agụ ha agụụ bụ eziokwu, mana ha achọghị iche nrụgide nke ụmụ nwanyị na ọha mmadụ ihu. Fọdụ ụmụ nwoke achọghị ka ha na ndị mmadụ nọrọ, ụmụaka a na-ahụ n'anya na-abụkarị ndị a na-amatabeghị na ha nwere ike ịbụ ihe kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ịzụtabeghị nwa bebi tupu oge ahụ, mgbe ahụ enwere m ike ịgwa gị otu ihe-belụsọ ma ị mụrụ ịmụ nwa nwanyị ...
All gị Fantasies
Jiri Mmekọahụ Mmekọahụ Na-emezu Echiche Gị niile
A ga - ejide gị n'ọnwụnwa ya mara mma. Lsmụ bebi siliki anaghị ajụ, ị nwere ike iji ya mezuo echiche gị niile. Nke a na - abụkarị ihe na - agwụ ike maka ụfọdụ ụmụ nwoke chọrọ iji ya, ọ na - abụkarịkwa ihe kpatara ụmụ nwoke anaghị achọ ịgakwuru ụmụ nwanyị. Na-agabiga otu mmejọ na mmadụ (n'ezie ọtụtụ oge) na ịmụ ihe site na mmejọ, nke ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Bodytụnanya Ahụ N'ihu Gị
Ezigbo ụmụ nwanyị nwekwara ike inwe mmekọahụ. Ezigbo ụmụ nwanyị na-enwekarị ọtụtụ akpa, dịka ọnọdụ ndị gara aga, ihe omume na ọtụtụ nsogbu. Ọbụghị naanị n’ihi na ejiri ego gị tara ahụhụ na nwa bebi ị masịghị, mana nke kachasị mkpa bụ na iwe na-ewe gị site n’inweghi ike ịchọta njikọ na mmekọrịta nke ụmụ bebi niile na-ekwu okwu ọma. Otu ugboro ...
Sexzọ Mmekọahụ Mmekọahụ
Wayzọ Mmekọahụ Sexzọ Mmekọahụ na Ndị Mmekọ Na-eme Ka Threesomes
Ọ bụrụ n’ị gafere usoro nyocha ma were nwa bebi n’enweghi nsogbu, ọ nweghị onye ga - ekwenyerịrị obi ụtọ gị. N’ezie, i nwere ike inwe nkụda mmụọ karịa mgbe ọ bụla. Isi ozu dị mfe ịchekwa, dị ọcha ma jiri ya. Ọ dị mma maka iji naanị ma ọ bụ na onye òtù ọlụlụ, nke a bụ otu m ga-esi jiri nwa bebi na nwoke na nwanyị nwee mmekọrịta atọ. Ya mere, nwa bebi ahụ nwere ike ịrụ ọrụ dịka ọ dị mkpa. Na ...
Bugharịa Mmekọahụ Mmekọahụ Na-enweghị Ihu Ihu Pessure Company
Ọ bụ n'ezie nnukwu. The nwa bebi na mmekọahụ bụ n'ezie na pushing ya na nke ya bụ ihe obi ụtọ, na ụra na "akpụkpọ" na ozugbo okpomọkụ ele ikpọ. N’anya, ụmụ bebi silicone yiri nnọọ ezigbo ụmụ nwanyị. Banyere ọkpụkpụ, a na-eji ígwè dị nro ma na-eguzogide corrosion mee ya ma tinye ya n'ime nwa bebi ahụ site na ịkpụzi nke silicone. Maka mmadu ...
Ugo nke ulo oru mbo nwere mmekọahụ nwa bebi na dị njikere imefu
Ọ dabere na ọkwa nke ego ị nwere ma dị njikere imefu. Ọ bụkwaghị otu ụdị vinyl inflatable doll, ọ zuru ezu ma tụọ ihe dịka kilogram 30. Na bebi mmekọahụ, ị ​​nwere ike ịhapụ nwanyị a n'enweghị nsogbu ọ bụla. Nye ụfọdụ ụmụ nwoke, ịnagide ihe na-abụkarị ihe ihere n'ihi na ọ bụ otu ihe na-adabara ha onwe ha ma ọ bụ na ha apụghị ịnagide ihe ...
Nwanyị zuru oke
Mmekọahụ Mmekọahụ A Na-agba mgba Tochọta Nwaanyị Zuru Okè
Ikekwe ogologo oge, ha na-achọ ịchọta nwanyị zuru oke, mana ha enweghị ike, n'ihi na nke a abụghị ihe ha nwere ike ịchọta. Oge ụfọdụ ọ na-esiri ike ịchọta ụzọ, mana ọtụtụ ụmụ nwoke na-ejikarị bebi silicone. Nwa bebi mmekọahụ, nke a makwaara dị ka nwa bebi ịhụnanya, bụ ihe eji egwuri egwu mmekọahụ nke yiri ezigbo mmadụ ejiri igbo onwe ya. Ọ bụrụ na ị nwere ezigbo ego, ...
Onye dị adị n'ezie
Mmekọahụ Mmekọahụ Na-adị Ka Onye Dị Adị
Ha na-amụta ya site na nnwale na njehie, mana oge ụfọdụ ọ na-egbu mgbu. Ruo ugbu a, azụrụla m ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ obere bebi, na ịzụta nke ọ bụla, enwere m obi ike karị. Mgbe ịzụrụ nwa bebi ugbu a, agaghị m enwe mmetụta n'ime na obi abụọ. Enwere ọtụtụ nhọrọ, mana ọ dabere na mkpa gị na ego ị nwere ike iji. Silicone doll bụ doll ezi uche, ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Na-enwe Obi Mutọ Na Ahụ
Ọ bụrụ na ụkwụ gị na ụkwụ meghee ahụ gị, wee chọọ ihe na-egbo mkpa gị, ma ọ bụrụ naanị ịnyịnya ibu na ikpu ịchọrọ, ị nwere ike ịmasị nwa bebi mmekọahụ. Ọ ga - enye ọrụ ọtụtụ oge ịchọrọ, ọ ga - ewetara gị ọ theụ niile. Na mgbakwunye, ị nwere ike iyi ya na akwa na akwa akwa. Ndị nwoke na-ekwenyekarị na ụmụ nwanyị n'ezie ...
Utlọ ọrụ a pụrụ ịtụkwasị obi
Zụta Mmekọahụ Mmekọahụ Site na Companylọ Ọrụ Kwesịrị Ekwesị
Ebumnuche bụ iji gboo mkpa mmekọahụ nke ndị agha German n'oge mwakpo ndị Nazi nke Europe. Na-achọsi ike maka nwa bebi na-enwe mmekọahụ, naanị m ga-azụta n'aka ụlọ ọrụ ndị a ma ama, n'ihi na ọtụtụ oge, ụmụ bebi adịghị ọnụ ala sitere na ụlọ ọrụ ndị amaghi ama nwere ike bụrụ ihe na-emerụ ahụ ma na-egbu egbu. Ihe egwuregwu ụmụaka nwoke niile bụ 100% nchekwa. Kwesịrị ịlele ule ndị a iji hụ ma ha dị adị ọ bụghị azụmaahịa ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Help Nwere Ike Inye Ọtụtụ Nwoke Ndị Nwere Nsogbu Aka Nwee Mmekọrịta
Ogologo oge tupu eresị ha, a nwalere ụmụ bebi silicone ka a nwaa ha iji hụ ma ha mezuru ụkpụrụ achọrọ (aka, mmetụta, wdg). Kwesighi iburu ya ka ị rie, ị gaghị eso ndị ọgọ ya ma ọ bụ ezigbo ndị enyi ya kpọrọ asị na obi ike ya, n'ihi na ọ baghị uru. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ nwere ike inyere ọtụtụ ụmụ nwoke ndị nwere ọgba aghara aka ịmalite mmekọrịta ...
Nwale Mmekọahụ Mmekọahụ iji jide n'aka na ị na-azụta onwe gị
Ya mere na-emeso nhọrọ ịzụrụ nwa bebi gị otu ụzọ ịzụrụ ụgbọ ala-were oge ịhọrọ, tụlee uru na ọghọm nke nwa bebi ọ bụla-ma nye iwu! Imirikiti ụmụ bebi na-enwe mmekọahụ na-eji ihe ndozi n'efu, agbanyeghị, jide n'aka na ị na-eji mmanụ mmanu mgbe niile, hichaa nwa bebi ahụ, chekwaa nwa bebi ahụ nke ọma, ma hụ na echekwara ya na enweghị ...
Aka nri Dex Foll
Họrọ Ezi Dex Foll adịghị mfe mgbe niile
Dị ka aha ahụ "ụmụ bebi mmekọahụ" n'onwe ya na-egosi, e mepụtara ha n'ụzọ bụ isi iji mejuo agụụ mmekọahụ nke onye nwe ya. Ilekọta ihe eji egwuri egwu nwoke na nwanyị bụ ihe dị mkpa iji hụ na ọ dịruru ọtụtụ afọ na-enweghị anya mmiri. Nwere ike ịhapụ ya ka ọ gbuo ikpere n'ala, gbue ikpere n'ala, ma ọ bụ gbue ikpere ya, dabere na gị. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ na-esiri nwoke ike, ma ọ bụrụ na ị ju ...
Akwa-akwa Mmekọahụ Mmekọahụ na Ihe Kachasị Mma
Lsmụ bebi Silicone nwere ike ijide ọnọdụ dị iche iche iji hụ na ị nwere ọtụtụ egwuregwu. Ha enweela ọganihu dị ukwuu kemgbe e kere ha. Taa, ọtụtụ ụmụ bebi nwere ụdị akpụkpọ anụ abụọ dị iche iche, otu n'ime ha bụ eziokwu ma nwee ike gbasaa n'ime ahụ niile. Kama nke ahụ, ndị ọkwọ ụgbọ mmiri Dutch na-amaghị ihe na ndị aghụghọ bụ ndị mepụtara ụmụ bebi mmekọahụ na narị afọ nke 17. Ka emechara, ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Na-adịkwa Ka Nwanyị Dị Ezigbo
N'ezie, ị nwere ike ihi ụra n'akụkụ, mana mgbe ụfọdụ, nwoke na-achọ ịgbapụta ngwa ngwa. Maka ụmụ bebi ịhụnanya, ị na-abụkarị azịza ziri ezi n'ihi na ha dị ezigbo nghọta ma yie ụmụ nwanyị n'ezie. Nke a bụ ihe ụfọdụ ndị na-ekwu. Agbanyeghị, nke bụ eziokwu bụ na n'adịghị ka ọtụtụ ndị, Hitler nwere ike ọ bụghị na ọ mepụtara ụmụ bebi mmekọahụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ chọrọ nwa bebi nke nwere ike inye ...
Gbanwee Nsogbu ahụ
Mgbe ahụ TPE Doll Mmekọahụ nwere ike idozi nsogbu ahụ
Dolmụ bebi na-ahụ n'anya, mana ị nwere ike ịsị na ha anọghị na mba ọzọ, enweghị ike ịnagide mkpakọrịta nwoke na nwanyị, ma ọ nweghị ike ịnọnyere ndị mmekọ ha. Iji dozie nke a, Hitler nyere ụmụ bebi Nazi ụmụ nwanyị ahụ, na-ewepụ mkpa ọ bụla maka ndị agha inyocha ikpu mba ụwa. Mgbe a jụrụ gị ma ị ga-azụta nwa bebi TPE ma ọ bụ nwa bebi silicone, nhọrọ ahụ ga-adabere na mkpa nke t ...
Na-achọ Mmekọahụ Mmekọahụ Naanị Oge na Ike
Mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike ịchọ oge na ume mmadụ na-enweghị. Maka ụfọdụ ụmụ nwoke, ọ nwere ike iyi ihe ijuanya ịhọrọ ezigbo nwa bebi maka nwanyị. Ọ bụrụ na ndị agha amalite ịtụrụ ime ụmụ nwanyị Europe, ụmụ ha ga-agwakọta. Echiche anyị na-amalite site n'echiche nke ahụ, operability, ma na-agafe ụmụ bebi nwere pr ...
Ndụ Mmekọahụ A Na-agaghị Echefu Echefu
Mmekọahụ Mmekọahụ na-ekwe nkwa Inwe Ndụ Mmekọahụ A Na-agaghị echefu Echefu
Ihe isii ị nwere ike ime iji dọọ na Los Angeles ma ọ bụ ebe ọ bụla bụ ihe ọchị. Onye mara nka kpụrụ ọ mara mma ya. Lsmụ bebi ndị a ga-ewetara gị ahụmịhe a na-enwetụbeghị ụdị ya. May nwere ike ị hụtụbeghị isi na-acha ọbara ọbara na uwe ime, mana ụmụ bebi silicone ga-eme ka ịchọrọ. N'ezie, na-abịa na usoro nke ọdịnaya kachasị atọ ụtọ. Mmekọahụ doll p ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Gị
Can Pụrụ Imekwu na Mmekọahụ Mmekọahụ Gị
N’otu mba ndị lụrụ karịa otu nwaanyị, ndị họọrọ ịlụ karịa otu nwaanyị kama ịlụ di na-ewute ụmụ nwoke. Lsmụ nwanyị na-enwe mmekọahụ bụ otu n'ime ihe ụmụ nwoke n'oge a "na-achụso obi ụtọ". Site na ịrị elu ahịa na-arịwanye elu, ogo ụmụ bebi mmekọahụ enweela nke ọma. N'ihe banyere ọdịdị na imetụ aka, nke a bụ ndụ n'ezie ma ọ na-eju ọtụtụ ndị anya. Afte ...
Silicone ezi uche
A Na-ewere Mmekọahụ Mmekọahụ Silicone Kasị Dị Iche
Na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na China, a na-eme ụmụ bebi dịka ọchịchọ ndị ahịa. Ugbu a ị nwere ohere iji chepụta onwe gị mmekọahụ nwa bebi. Dolkpụrụ doll a dị adị dị iche na ụmụ bebi ndị ọzọ na ọnụahịa na mma. Taa, na ọha mmadụ a, ị ga-etinye nnukwu ego iji lekọta onye gị na ya na-emekọ ihe na mgbe mmekọrịta na-aga. Nwa gị, ma anụ ụlọ gị, ga ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Na-eme Ka Workingdị Ọrụ Na-arụ Ọrụ Karị
Redheads nwere ezigbo aha, na "ibu-na" abụghị otu. A na m eche ma ị ma ugbu a? Iji zere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ, ọtụtụ ebe a na-eme ihe nkiri na ebe a na-ere ihe na-amachibido ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ, ma ụmụ bebi ndị metụtara mmekọahụ adịchaghị akpali agụụ mmekọahụ! You nwetụla mgbe ị zubere inwe a nwa bebi? Ọ bụrụ otú ahụ, ọ bụghị naanị gị. Dabere na akụkọ, ụmụ bebi mmekọahụ aghọọla ...
Mmekọahụ Mmekọahụ nwere Ihe Niile Need Chọrọ Iji Mee Gị Obi .tọ
Ọtụtụ ndị anaghị eji ntụrụndụ akpọrọ ihe, mana ha kwesịrị. Anyị bi n'oge nsogbu. Iwepụta oge iji zuru ike bụ ihe dị mkpa, na ịkpọ onye ibe bụ ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe iji hụ na mmadụ nwere ahụ iru ala ma nwee obi ụtọ. TPE bụ ụdị silicone ọhụrụ nke enwere ike ịgbatị na 5.5 ugboro karịa ma dị nro! Nwara ka nchekwa dịịrị ụmụ mmadụ. Ndị ...
Mbughari Na Na
Mmekọahụ Mmekọahụ nwere ike iguzo ma nwee ubu
Ọ bụrụ na ileghị anya nke ọma, ị ga-eche na ọ bụ onye dị adị. Ọ bụ ya mere, ọbụlagodi na enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye, ọtụtụ ndị nwoke na-atụgharị ma na-ele ụmụ nwanyị mara mma anya. Ọ bụ ya mere anya gị ji elekwasị anya n'ụdị ụmụ nwanyị mara mma. Nwere ike ịhọrọ agba nke anya gị, ịkpụcha mbọ aka gị, yana ma ihe nlele ahụ kwesiri iguzo ma nwee "ubu agagharị", ...
Mmekọahụ Doll Skin nwekwara ike rụkwaa ya na teknụzụ kachasị dị elu
A na-eji nkwonkwo teknụzụ kachasị arụ ọrụ mmadụ site na iji teknụzụ ọkachamara kachasị ọhụrụ iji hụ na aka na ụkwụ nwere ike ịgbatị kpamkpam iji mepụta ọnọdụ dị iche iche. N’anya, nwa bebi ahụ zuru oke, obi dị ike ma dịkwa nro. Banyere hips, ha dị okirikiri, dịkwa ike ma dịkwa nro. Dị ka ụmụ bebi mmekọahụ ugbu a, ọdịdị ahụ abụghị naanị nso ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Nweta Onye Ibe
Ọ na-apụta na ụmụ bebi ndị a sitere na resin silicone abụghị naanị ndị mara mma ma mara mma, kamakwa ha yiri nnọọ nke ọma na omume na ndị ezigbo mmadụ. Na ileba anya mbu, o siri ike ịhụ ya dị ka ihe efu. Soro maka njem na-enweghị isi. You nwetụla mgbe ị rutere obodo ọhụrụ iji chọpụta ma ị maghị ihe ị ga-eme? Ndị ndu bụ ndị nduzi kachasị mma! Site cho ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Bụ Ezigbo Nhọrọ Gị
Ọ bụrụ n'ịchọghị ichegbu onwe gị gbasara ịhụnanya na mmefu niile, ihe eji egwuri egwu nwoke na nwanyị bụ ezigbo nhọrọ gị. Naanị alimoni maka ụmụ bebi mmekọahụ bụ ohere nchekwa kwesịrị ekwesị nke nwere ike ihicha ma jiri ya mgbe niile. Hụ nwa bebi ahụ, anyị maara ozugbo na anyị na-eme ngwaahịa dị elu. N'ezie, enweghị ntụpọ na ihu, ntakịrị Asia, nkịtị, mara mma a ...
Ara ara ya
Mmekọahụ Mmekọahụ Pụrụ Thehọrọ Agba nke Ọnụ ara Ya
Dolmụ nwanyị na-enwe mmekọahụ dị ka condom anyị na-ahụkarị. Ha bụ ngwaahịa ndị okenye. Requirementsfọdụ chọrọ dị mma ma enweghị ike ịkọwa ya na ihe na-akpali agụụ mmekọahụ. Enwere ike ikwu na mmepe a n'ọtụtụ ihe, nke kacha pụta ìhè bụ akparamàgwà mmadụ. Ofbụrụ ụmụ nwoke ma ọ bụ ụmụ nwanyị jikọtara iji nwee ekele maka ọdịdị mmadụ. Mgbe ị na-ahọrọ mmekọahụ d ...
TPE Mmekọahụ Doll Softer Rubber Doll Ga-esi ike
Ezigbo anụ ahụ mara mma na-adị mma ma nwee ike ijide aka. Ka a sịkwa ihe mere a na-akpọkwa usoro ụmụ bebi mmekọahụ a "akụkọ ifo silicone". Ledị nwayọọ dị nwayọọ dị ka akụkọ ifo. A sị ka e kwuwe, ndị na-eme njem nleta enweghị ike ịnye nlebara anya otu otu na otu, ma ọ bụ ọbụna nye ọ bụla nlebara anya ọ bụla. Ga-abụ otu ma gaa naanị ọnyà ndị njem ama ama. Nke ahụ bụ wa ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Aghọọ Nwaanyị Nrọ ahụ
Nke a na - enye gị ohere pụrụ iche ịtụrụ ime nwanyị ịchọrọ ka ọ bụrụ. Jiri ihe eji egwuri egwu nwoke ma obu umu nwanyi. Ọtụtụ ndị di na nwunye na-eche na ha na-egbochi afọ ime mgbe ha na-enwe mmekọahụ, n'ikpeazụkwa, enyi nwanyị ha tụrụ ime. Condom ahụ gbawara ma ọ bụ nwanyị ahụ bu n'obi ịtụrụ ime. N'ihe banyere njikwa, nwa bebi ahụ dị f ...
More chọkwuru Nlekọta
Wigs nkịtị nke na-eso ụmụ bebi na-enwe mmekọahụ maka n'efu chọrọ nlekọta ọzọ
Nkịta ahụ bụ nke m ga-akwado, ị nwere ike iji ya nwee ike ịnụ ara ya. Maka ọtụtụ ndị chọrọ ịzụrụ na nke mbụ, ha abụọ na-achọ ịma ma na-atụ ụjọ n'ihi na ha amaghị etu esi eji ya ma ọ bụ zụta ya. Otú ahụ ka ọ dịkwa maka ụmụ nwanyị ndị na-achọpụta ọdịdị ụmụ nwoke ma ha apụghị ịmasị ihe ọkpụkpụ a kpụrụ akpụ. Chọrọ nlekọta karịa t ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Mmekọahụ Dị Ka Nri Ya Dị
Ikwenyere gị na njem a na-emeghị atụmatụ bụ ụzọ kachasị mma iji nweta ebe ị na-aga n'ụzọ zuru ezu! Lsmụaka Silicone na-enwekarị nkwesi olu ike, ebe rọba TPE dị nro dị nro. N'ezie, bebi silicone nwekwara ike ịdị nnọọ nro, mana ọnụ ahịa ga-aba ụba nke ukwuu; ike iburu gị ga-ahapụrịrị gị na-enweghị atụ. Mụ na ya, se ...
Utezọ kachasị ọsọ
Mmekọahụ Mmekọahụ Bụ Ọbụna utezọ kachasị ọsọ
Generousdị obi ya na-emesapụ aka na ọdịdị ya na-enye anyị nkọwa nke ihe anyị nwere ike ime, ya bụ, ihe ọ bụla na-abata n'uche. Ihe kachasị ịtụnanya bụ na a na-ahazi ụmụ bebi ndị a nke ọma ma ha enweghị ihe ha ga-ekwu. Mgbe ha yi uwe mara mma, ha na-eyi dị ka foto foto mara mma! Ha maara klọb kachasị mma, ụsọ osimiri kachasị dị ọcha, culinary a ma ama ...
Mmekọahụ Doll Onye Okike Pụrụ Expresskọwapụta Àgwà nke Ezigbo Onye
Ebe obu na obu nkita aka ejiri aka mee, o nweghi ihe ntupo. O were ọtụtụ awa iji mee ya. Na mgbakwunye, ọ dị naanị kilogram 20, na ọkpọ igwe ya na-agbanwe ma na-adaba adaba. Can nwere ike ịhapụ ya n'okpuru akwa, n'ime ime ụlọ ma ọ bụ n'okpuru ala, ọ bụrụhaala na ị chere na ọ dịghị onye ga-atụgharị. Ihe gị. Ihe oyiyi ndị a na-enyere ndị okike ha aka igosipụta ikike ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Mmekọahụ Dị Mma Karịa TPE Mmekọahụ Mmekọahụ Soft Soft Pọt
Ọ na-amasị gị iri nri n'èzí? Y’oburu n’ichọ nri ndi ichoro na icho ime efere ohuru, o nwere ike buru ihe uto iji nwalee ulo oriri ohuru nke ha na ndi escort. Lsmụaka Silicone na-arụ ọrụ ka mma karịa ụmụ nwoke na nwanyị TPE na-enwe mmekọahụ. Ebe ọ bụ na ihe a na-esikwu ike, arụmọrụ ga-aka mma. Simfọdụ simulated handprints na nkọwa nwere ike na-anọchi anya silicone se ...
Nwee Obi .tọ
Mmekọahụ Doll Sex Ga-ewetara Gị Ọzọ Moretọ
Saa nwa gị ozugbo gị na ya nwee mmekọahụ. Nke a na-achọkarị ka ọnye ọbara wepụ site na isi. E jiri ya tụnyere iji bebi na-afụ ụfụ ma ọ bụ obere bekee silicone, inwe mmekọahụ na ụmụ bebi ndị mara mma ga-ewetara gị obi ụtọ. N’ezie, a haziri ihe niile nke ọma iji mee ka ị nwee obi ụtọ. Ọ bụ ezie na amaara m site n'obi na ha bụ naanị mmekọahụ d ...
Mmekọahụ Robot Version
Mmekọahụ Mmekọahụ Na-eweta Mmekọahụ ha Robot Version
Ihe omuma atu nke ihe omuma nka ndia bu ihe akpụrụ nke David nke Michelangelo mere na 1504 na ihe akuko nke ohu ohu nwanyi Greek nke Hiram Bowers mere na 1843. O bukwa na ụdị nke robot mmekọahụ ha, mana ọ na-abịa na ahụ ọkụ nke igwe, igwe okwu na ọgụgụ isi. , nke pụtara na ị nwere ike ikori na ihe nlereanya ahụ. Dolmụ nwanyị na-enwe mmekọahụ adịghị enwe mmekọrịta ahụ ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Pụrụ Hzobe Ya n'ụlọ
O nwekwara mmetụta dị egwu, amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi nnukwu ara ya ma ọ bụ ọnọdụ ya. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ nwere ikpu magburu onwe ya, ike ma nwee ọnụ ọgụgụ anụ ahụ, ị ​​gaghị agwụ ike. Onye ọ bụla nwere oge mbụ. Ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị na mmadụ ga-achọpụta obere ihe nzuzo gị, ị nwere ike zoo ya n'ụlọ. Kemgbe ọtụtụ narị afọ, ndị mmadụ anọwo na-emepụta na ...
Mmepe Na-aka Mma
Mmekọahụ Mmekọahụ Ga-abawanye Ka Mmepe Na-aka Mma
Dolmụ nwanyị na-ahụ maka mmekọahụ na-enye gị ohere ịmezi ihe ị masịrị iji mee ka ekele gị maka ọdịdị mmadụ dịkwuo elu. Ezigbo ndị hụrụ n'anya abụwo okwu nke ogologo oge na mgbasa ozi gburugburu ụwa. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị mmadụ etinyewo uche pụrụ iche na ahịa nke ụmụ bebi mmekọahụ na ezigbo ndị hụrụ ha n'anya, anyị nwere ike ịhụ mmụba nwere mmasị n'afọ ndị na-adịbeghị anya iji meziwanye ...
Ha Na Igbe
Mmekọahụ Mmekọahụ Na-ehicha Ha Ma Na-etinye Ha na Igbe
Ọ ga-adị mfe iji onu onu, gbasara ike mmekọahụ na kpochapụwo mmekọahụ. Ihe nlere a doro anya na-amasị ihe na-acha uhie uhie. A na-echekwa ụmụ bebi mmekọahụ nke ọma. Naanị ị ga-ehicha ha mgbe ejiri ha tinye ha n'ime igbe. Echiche a metụtara inwe nwa bebi nwoke na nwanyị. Gị, onye nwe ya, nwere ike ịhọrọ ụdị nwa bebi nwoke na nwanyị nke gosipụtara nke ọma njirimara gị dị mma.
Ezigbo Maka Nri Anyasị
Mmekọahụ llọ Ọrụ Mmekọahụ Dị Mma Maka Nri Anyasị
Ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị maka azụmahịa, ma ọ bụ nanị na-achọpụta na ọ dịghị nke ndị enyi gị na-karịsịa ibuo, mkpakọrịta bụ ezigbo nri abalị ụbọchị. Enwere ike ịgbatị nwa bebi silikọn atọ na ise dịka usoro dị iche iche si dị, ebe a na-agbatị ụmụ bebi TPE isii ruo asatọ. Ya mere, TPE adụ roba nwere mma ike ọdụdọ na ọzọ v ...
Ọnọdụ Women'smụ nwanyị
Mmekọahụ Mmekọahụ Adịghị Akwụkwa Ọnọdụ Women'smụ nwanyị N'ọdịnihu
Ara ya na-ama mma ma na-esi ezigbo ike, ma a na-emegharị nkọwapụta gbasara ike na gbasara ike. Mgbidi dị n'ime nke ikpeazụ na-agbanwe ma dị nro, nke na-eme ka o kwe omume iji uru nke orifices niile dị na ya. kwesịrị ya? Gosh, nwa bebi ndị a siri ike abụghị naanị "ihe egwuregwu". Ha mara mma dịka ụmụ agbọghọ anime si ...
Nsogbu ndị a
Mmekọahụ Mmekọahụ Nwere Ike Izere Nsogbu Ndị A
N’ụzọ dị otu a, ọmarịcha ọrụ nka ndị a nwere ike ime ka ndị mmadụ tụgharịa uche banyere onwe ha nke ọma. Ọ dịghị onye nwere ike ịza. Ajuju gi. Ọ na-ebu ezigbo ahụ ọkụ, enweghị isi na-ekwu na ọ nwere akụkụ ahụ na-agagharị. Mmekọahụ site na mmekọahụ dị nnọọ nchebe. A na-emepụta ọtụtụ nje site na mmekọahụ, a na-ekwukarị na ha na-ebute site n'otu nje gaa na onye ọzọ ...
Ebe njedebe gị
Mmekọahụ Mmekọahụ Thezọ Kachasị Mma Iji Nweta Ahụhụ Gị niile
N’otu mba ndị lụrụ karịa otu nwaanyị, ndị na-ahọrọ ịlụ karịa otu nwaanyị karịa idozi ihe na-ewute ụmụ nwoke. Ha maara klọb kachasị mma, ụsọ mmiri dị ọcha, ndị ọkachamara na-eri nri a ma ama, na ọbụna ụzọ ndị kachasị ọsọ. Ikwenyere gị na njem a na-emeghị atụmatụ bụ ụzọ kachasị mma iji nweta ebe ị na-aga n'ụzọ zuru ezu! Dị iche na price: The price nke raw m ...
Dolmụ bebi a na-enwe mmekọahụ bụ otu n'ime ụmụ bebi kachasị mma na ahịa
Site na ụbọchị mbụ nke ịzụta, ihe eji egwuri egwu mmekọahụ ewepụla ọnọdụ a kpamkpam. Ikwesighi inwe obi abụọ na nchegbu. Nke a abụghị ihe kachasị mma maka ịzụta ihe eji egwuri egwu mmekọahụ? Y’oburu n’inwe obi uto nke umu bebi nwoke na nwanyi, nwa bebi a bu otu n’ime umu bebi kacha mma na ahia. Mana maka ndị chere oke oke ego, enwerekwa nwa bebi. Nwa gị, ọbụna anụ ụlọ, s ...
Mmekọahụ nke anụ ahụ
Mmekọahụ Mmekọahụ Na-egbo Mkpa Nkịtị Mmekọahụ
Dolmụ bebi mmekọahụ na-enye nkasi obi dị ukwuu ma ọ bụrụ na mụ na onye òtù ọlụlụ gị, enyi nwanyị gị ma ọ bụ enyi gị anọbeghị ogologo oge. Ọrụ nwere ike ịmanye gị ịkwaga obodo ọhụrụ, steeti ma ọ bụ obodo ọhụrụ. Email, ekwentị, na ndị na-enye ọrụ izi ozi nwere ike izute mkpa nkwukọrịta nke gị na ndị ị hụrụ n'anya, yana mkpa ịbịaru mmekọrịta chiri anya na-abụkarị nsogbu ...
Mmekọahụ Doll arọ Na-adabere Oru na Lining Ọkwa nke Emeputa
I nwedịrị ike ịga ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na-enye gị nri nri nri ị na-amabeghị ma were ya na ọkwa ọzọ. Ọ nwere ike ịbụ ihe na-atọ ụtọ ịchọpụta, ọkachasị mgbe ị nwere ndị mara mma gbara gị gburugburu. Dolmụ bebi silikone nke hà nha ga-ebu ihe karịrị ụmụ bebi TPE, dabere na nka na ihe nrụpụta. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ...
Mmekọahụ Mmekọahụ zuru oke maka ịchọrọ ụmụ nwoke
Domfọdụ condom a na-egbu egbu bụ ụzọ dị mma iji zere ọrịa na-ebute site na mmekọahụ, mana ha anaghị ewepụ kpamkpam ọrịa. You ga-enwe nwa bebi mara mma, dị njikere iji obi ụtọ ya na-atọ gị ụtọ. Ya mere, ụmụ bebi mmekọahụ a zuru oke maka ụmụ nwoke na-achọsi ike. Dolmụ bebi mmekọahụ adịghị achọ mmezi. Taa, na ọha mmadụ, ị ga-anọrịrị lo ...
Onye Mmekọ Na-eguzosi Ike n'Ihe
Mmekọahụ Mmekọahụ Bụ Ezigbo Onye Mmekọ Na-eguzosi Ike n'Ihe Gị
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịzụta obere bebi mmekọahụ maka ndụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ọnụahịa nwa bebi, yana ụmụ bebi mmekọahụ bụ ndị mmekọ kwesịrị ntụkwasị obi gị n'ihi na ha bụ nke gị. Ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị maka azụmahịa, ma ọ bụ nanị na-achọpụta na ọ dịghị nke ndị enyi gị na-karịsịa ibuo, mkpakọrịta bụ ezigbo nri abalị ụbọchị. Silicone mmekọahụ doll nwere elu iwe ...
Mmekọahụ Mmekọahụ Na-egbochikwa Cheghọ Aghụghọ na Di Gị Ma Ọ Bụ Nwunye Gị
Nkwakọ ngwaahịa dị n'èzí nke ụmụ bebi mmekọahụ ugbu a agaghị egosipụta ozi gị. Ọ bụrụ n ’ibi n’ụlọ ma achọghị ka ndị agbata obi gị mara na ị zụrụ ihe dị oke elu, ị nwere ike họrọ ebe ị ga - akọ onwe gị, nke nwere ike izere ọtụtụ ọghọm. Otu nwa bebi nwoke na nwanyị na-ewepu isi ọwụwa nke imeju agụụ mmekọahụ gị ma ọ bụrụ na ị pụọ na ndị mmekọ dị mkpa ...
Nkwado nwa bebi
Na-adịbeghị anya na-atụ aro